विश्वविद्यालयमा अब आगो लाग्दैन कि ! « paniphoto
« सुन्दैनौं थाहा छ, तर पनि डा. बाबुराम भट्टराई आङ कन्याएर छारो उडाउँदै »	विश्वविद्यालयमा अब आगो लाग्दैन कि !
By -पानीफोटो- on Thursday May 19, 2011	त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तगर्तका एम.ए. अंग्रेजी बिषयका विद्यार्थीहरुले केहि बर्ष अगाडी आफ्नै केन्द्रिय विभागमा आगो लगाए । आगो लगाउँनेहरुको आरोप थियो, भेदभाव र पुर्वाग्रहका कारण कसैलाई पनि नियतबश उचित अंक दिइएन । वास्तवमा, त्यो घटना नयाँ र नौलो भने पक्कै थिएन । प्राक्टिकलमा जात बिशेषमा नपरेको कारण अंक कम दिइयो वा व्यक्तिगत इवि साधियो भनेर क्याम्पस भित्र तोडफोडका घटनाहरु भने हरेक नतिजामा सामान्यतया हुने गर्दछन् । तर अंग्रेजी केन्द्रिय विभागमा भएको घटनाबाट भने यसले बिशलता कायम गर्न पुग्यो ।
त्रिचन्द्रमा एक विद्यार्थीको प्राप्ताकंको कथा पनि ताजै छ ।
यही बर्ष भौतिकशास्त्र अन्तगर्तको एम.एस्सी. प्रथम बर्षको क्वाण्टम बिषयको विवाद अझै कायम छ । स्मरण रहोस्, भौतिकशास्त्र अन्तगर्तको एम.एस्सी. प्रथम बर्षको क्वाण्टम बिषयमा केन्द्रिय विभाग भन्दा बाहिर एकदम कममात्र पास भएका थिए । र, पास हुनेहरुको पनि कमैको मात्र ४५ कटेको छ । अब कपि नै आफैले हेर्न पाउँने भएपछि सायद यस्तो घटना हुदैन ।
आग्रह र पुर्वाग्रहमा बहकिनु मानिसको प्राकृतिक स्वभाव हो । तर यही स्वभावको विवरण दिदै कसैको भविष्य माथि खेलवाड भइरहेको तथ्य हामी सबैलाई थाहा छ । हामी मध्ये कतिले यसको अनुभव पनि गरेका छौ । सर्वोच्चको यो फैसला पक्कै पनि विद्यार्थीको लागि निकै माने राख्ने फैसला हो ।
आफुसँग सुमुधुर सम्बन्ध भएको, नाता पर्ने या आफुसँग ट्यूसन पढ्ने विद्यार्थीलाई बढि नम्बर दिनेहरु बाँधिने छन् । त्यसो त, ए मैले त राम्रै गरेको थिएँ, कपि चेक गर्नेले डुबाएछ भनेर घरबाट सहानुभुति पाउँने विद्यार्थीका पनि दिन ढल्नेछन् अब । यसैले स्वच्छ कपि चेक हुनेमा अब धेरै हदसम्म ढुक्क हुन सकिन्छ । एउटा बिद्यार्थीको नातामा यसलाई हार्दिक स्वागत गर्नु पर्छ ।
« सुन्दैनौं थाहा छ, तर पनि डा. बाबुराम भट्टराई आङ कन्याएर छारो उडाउँदै »	3 comments to विश्वविद्यालयमा अब आगो लाग्दैन कि !
· जवाफ दिनुहोस्	मुख्य कुरा विश्वविद्यालयमा आगो लाग्छ या लाग्दैन भन्ने होइन । विद्यार्थीको भविष्यमा खेलवाड हुन्छ कि हुदैन । यो याद राख्नु पर्छ ।
कमेन्ट कस्तो लाग्यो ?:00	bikas
· जवाफ दिनुहोस्	त्रिचन्द्रमा एक विद्यार्थीको प्राप्ताकंको कथा पनि ताजै छ ।
कमेन्ट कस्तो लाग्यो ?:00	rabin manandhar
· जवाफ दिनुहोस्	भौतिकशास्त्र अन्तगर्तको एम.एस्सी. प्रथम बर्षको क्वाण्टम बिषयमा केन्द्रिय विभाग भन्दा बाहिर एकदम कममात्र पास भएका थिए । र, पास हुनेहरुको पनि कमैको मात्र ४५ कटेको छ । अब कपि नै आफैले हेर्न पाउँने भएपछि सायद यस्तो घटना हुदैन ।